Waa maxay dabaylaha ganacsiga: astaamaha iyo xiisaha | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 05/10/2021 14:03 | Saadaasha hawada
Mid ka mid ah dhinacyada dhaqdhaqaaqa cimilada waa dabaylaha ganacsiga. Waxay ahaayeen muhiimad weyn, gaar ahaan tan iyo qarnigii XNUMXaad iyada oo ay ugu wacan tahay inay saamayn weyn ku yeelatay maraakiibta maraakiibta. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga Waa maxay dabaylaha ganacsiga. Waqtigan xaadirka ah, weli waxaa jira kuwo badan oo lagu dhiirrigeliyay inay maraan iyagoo u mahadcelinaya dabaysha ganacsiga maadaama ay yihiin kuwa ka dhaca Ecuador iyo kulaylaha. Waxay ka soo afuufayaan cirifka waqooyi iyo dhulka koonfureed waxayna ku sugan yihiin aagga isku-xirnaanta Intertropical ee caanka ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa waxay yihiin dabaylaha ganacsigu, maxay yihiin astaamahooda iyo muhiimadooda.
1 Waa maxay dabaylaha ganacsiga
2 Sameynta dabaysha ganacsiga
3 Halka ay joogaan
Dabaylaha ganacsigu waa mawjadaha dabaysha oo ku dhowaad si joogto ah u dhaca xagaaga Waqooyiga Hemisphere waxayna jiilaalka yihiin kuwo aan joogto ahayn. Saameyntiisu waxay ka dhacdaa inta u dhaxaysa dhulbaraha iyo kulaylaha, iyo loolka waqooyi-koonfur wuxuu gaaraa qiyaastii 30º. Waxay yihiin dabaylo dhexdhexaad ah oo xoog leh, oo celcelis ahaan xawaaraha dabayshu qiyaastii yahay 20 km / h.
Sababtoo ah awoodooda aan burburin iyo xasiloonidooda muuqata xilliga xagaaga, waxay leeyihiin ahmiyad taariikhi ah maxaa yeelay waxay oggol yihiin jiritaanka waddooyin ganacsi oo badeed oo muhiim ah. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale mas'uul ka yihiin inay suurtogeliyaan inay ka gudbaan Badweynta Atlantikada iyagoo u socdaalaya Maraykanka. Kii ugu horreeyay ee abuuray khariidad faahfaahsan oo ku saabsan dabaylaha ganacsiga iyo dabaylaha ayaa ahaa Edmund Halley, oo daabacay khariidadda 1686 daraasad adeegsatay xogta badmaaxyada ganacsiga Ingiriiska.
Dabaysha ganacsiga dharbaaxo ka timid NE (waqooyi -bari) oo ku taal woqooyiga badhtamaha ilaa SW (koonfur -galbeed) xagga sare ee dhulka, oo ka afuuf SE (koonfur -bari) ilaa WG (waqooyi -galbeed) xagga hoose ee dhulka, taas oo ah, badhtamaha koonfureed. Jihada u janjeerida waxaa sabab u ah saamaynta Coriolis, taas oo keenta in wareegga dhulka uu saameeyo walxaha dhaqaaqa oo wax ka beddelo dhaqdhaqaaqooda si ka duwan iyadoo ku xiran cirifka ay ku sugan yihiin.
Sameynta dabaysha ganacsiga
Asalka dabaylaha ganacsiga ayaa ku jira sida falaadhaha qorraxdu siyaabo kala duwan ugu kululaanayso qaybaha kala duwan ee dhulka. Geedi socodka samaynta dabaysha ganacsiga waxaa lagu soo koobay hoos:
Sababtoo ah falaadhaha qorraxdu waxay leeyihiin saamayn weyn inta ay saamayn buuxda leedahay, taas oo ah, si toos ah, dhulbaraha dhulku wuxuu helaa kulayl ka badan ayaa sabab u ah kulaylka caalamiga ah. Dhanka dabaysha ganacsiga, marka kulaylka qorraxdu uu ku dhaco dhulka iyo biyaha gobolka Equatorial, kulaylku wuxuu aakhirka ku soo noqon doonaa hawada sare oo aad u badan, halkaasna kulayl badan. Hawadaani waxay fidisaa oo lumisaa cufnaanta marka la kululeeyo, noqoto mid khafiif ah, oo kacda.
Markay hawada kulul kacdo, hawo qabow oo ka timaadda kulaylaha ayaa buuxin doonta bannaan.
Taas bedelkeeda, hawada kulul ee ka kacda meel u dhow dhulbaraha waxay u dhaqaaqdaa xagga loolka 30º, iyada oo aan loo eegin cirifka uu ku yaal.
Markay gaadho heerkan, inta badan hawadu waxay qabowday si ay hoos ugu dhacdo heer sare, oo samaysato loop xidhan oo la yidhaa bateriga Hadley.
Si kastaba ha ahaatee, hawada oo dhan ma qaboojin doonto mar kale. Gabal ayaa mar kale kululaynaya oo u qulqulaya batteriga Ferrer oo ku yaal inta u dhaxaysa 30º iyo 60º ee loolka, wuxuuna ku sii socdaa xagga ulaha.
Saamaynta Coriolis ayaa sabab u ah in dabaylahaasi aanay si qumman u afuufin ee ay si isdaba joog ah, iyo sababta keentay in aragtidaada labada qaybood ee badhkeed qayb ahaan loo rogo.
Sidoo kale, barta kulanka dabaysha ganacsiga ee labada dhinac, ama aagga yar ee u dhexeeya, waxaa lagu magacaabaa ITCZ, aagga isku -dhowaanshaha kulaylaha. Meeshani aad bay muhiim ugu tahay doonyaha waayo waxay leedahay cadaadis hooseeya iyo cusboonaysiin badan. Roobab culus oo goos goos ah ayaa aad u badan oo goobtooda saxda ah ayaa si joogto ah isu beddelaysa isbeddelka cufka hawada.
Halka ay joogaan
Sidaan hore u soo sheegnay, dabaylaha ganacsiga ayaa ka curta dhulka oo dhan, oo ay ku jirto aagga u dhexeeya dhulbaraha iyo 30 digrii waqooyi. Tani waxay saameysay dalal badan. Jasiiradaha Canary waxay leeyihiin dabaylo ganacsi, qayb ahaan waxaa sabab u ah cimilada jasiiradahan Isbaanishka ah. Xilliga jiilaalka, si dhib yar ayay u saamaysay saamaynta xasilinta ee ka -hortagga ka -hortagga Azores. Meesha u dhow Tropic of Cancer iyo sifooyinka juquraafi ahaan waxay siisaa cimilada kulaylaha hoose ee xagaagaIn kasta oo ay fog tahay, waxay la mid tahay Badda Mediterranean -ka.
Waxa kale oo ay saamayn muhiim ah ku leeyihiin dalal ay ka mid yihiin Venezuela, Chile, Kolombiya, Ecuador ama Costa Rica, kuwaas oo dhammaantood ka imanaya gobollada kulaylaha lehna cimilo qalafsan oo sababa gelitaanka dabaylaha ganacsiga. Kuwani aad bay u kala duwan yihiin marka loo eego gobollada juqraafiyeedka iyo xilliyada gaarka ah.
Maskaxda ku hay inkasta oo dabaylaha ganacsiga iyo roobabku ay aad isugu dhow yihiin, isku mid bay ka fog yihiin oo yaan la isku khaldin. Dabaylaha ganacsigu waa dabaylo xoog leh oo si joogto ah u socda, halka roobabku ay yihiin dabaylo leh dabaylo xilliyeedyo xooggan oo soo daaya roobab tiro badan.
Antyclone ee Azores ayaa magacaas loo bixiyay sabab. Sababtoo ah waxay door ka ciyaartaa badiyaa gobolka Atlantic halkaas oo jasiiraddan kale ku taal, taas oo ah, Azores. Iyada oo ku xidhan barokaca anticyclone, saamaynta dadban ee dabaysha ganacsiga ee Jasiiradaha Canary ayaa laga yaabaa inay ka weyn tahay ama ka yar tahay.
Xilliga jiilaalka, kaniinigaan liddi ku ah wuxuu aad ugu dhow yahay Jasiiradaha Canary. Tani waxay keenaysaa xasillooni weyn iyo dabaylo ganacsi oo yaraada. Sidaa darteed, hawada qabow saamayn yar bay ku leedahay jasiiradaha. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah in la joogteeyo jawi wanaagsan oo diiran xilliga qabowga.
Xilliga xagaaga, anticyclone waxay u guureysaa Azores. Marka laga sii fogaado Jasiiradaha Canary, waxaa sii kordhaysa saamaynta dabaylaha ganacsiga. Sidaa darteed, dabaylaha ganacsiga xagaaga ayaa si aad ah u qarxiya, sidaa darteed heerkulku ma cirka mari doono.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa ay yihiin dabaylaha ganacsiga oo aad hoos u dhigi kartid astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Waa maxay dabaylaha ganacsiga